विद्यालयको हविगत कन्तविजोग : मैदानभर मकै, कोठाभर दिसा ! ::Nepali TV
You are here : Home News विद्यालयको हविगत कन्तविजोग : मैदानभर मकै, कोठाभर दिसा !
विद्यालयको हविगत कन्तविजोग : मैदानभर मकै, कोठाभर दिसा !
झापाको पुरानो सदरमुकामस्थित झापा बजारको त्रिभुवन आधारभूत विद्यालयको अवस्था यतिसम्म दयनीय छ कि मैदान बेहान–बेलुकी ठ्याक्कै गौचरनजस्तो देखिन्छ । विद्यालयमा कम्पाउण्ड छैन । गाउँका गाईवस्तु चर्न आउने स्थान बनेको छ, विद्यालयको मैदान । दिनभर विद्यार्थीले गाई भैँसी धपाएर पढ्छन् । साँझ फेरि, अवस्था उस्तै हुन्छ ।
विद्यार्थीका लागि यो विद्यालयमा सुरक्षित शौचलयसम्म छैन । ३ सय ६७ विद्यार्थी र शिक्षकका लागि एकमात्र शौचालय छ, त्यो पनि, प्यान फुटेको । यूरिनल एउटा छ । विद्यालयका छात्रछात्रा दिसा पिसाव गर्नका लागि नजिक घर हुनेहरु घरमै जान्छन्, टाढा घर हुने छात्रा गाउँलेको घरमा पुगेर चर्पी प्रयोग गर्ने अनुमति लिन्छन् ।
विद्यालयमा थप दुई कोठाको एउटा चर्पी ब्लकसमेत थियो । गाउँलेहरुले ढोका फोरिदिए । ढुंगा हालेर चर्पी बन्द गरिदिए । अघिल्लो वर्षमात्र बनेको एउटा शौचालयसमेत प्यान फुटेपछि बन्द भयो । ढोकासमेत नभएको यूरिनलमा बाहिरबाट आउनेहरुले समेत दिसा गरिदिए । विद्यालयका लागि अर्को चार कोठे ब्लक बनिरहेको छ, तर त्यहाँ पनि चर्पी छैन ।
तर, झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह भने समुदायको सरसफाई प्रबर्द्धनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त बनाउनका लागि आवश्यक रकमको समेत विनियोजन गरेको छु,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘आवश्यक पर्छ भने अरु रकम विनियोजन गर्न पनि तयार छु ।’
समुदायका व्यक्तिहरुको सरसफाइप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिविम्व संस्थागत सरसफाइमा समेत देखिएको उनले बताए । ‘चर्पीलाई माया गर्ने बानी नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले संस्थागत शौचालय पनि बेवारिसेजस्तै बनेका छन् ।’ सबै प्रधानाध्यापक र वडाअध्यक्षहरुलाई संस्थागत सरसफाइ प्रबद्र्धनमा लाग्न निर्देशन दिनेसमेत उनले बताए ।
यस्तो पनि !
यो विद्यालयको मैदानलाई अर्कै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले घरको आँगनजसरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । गाउँका अगुवा भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद गणेशका छोरा प्रदीप गणेश सोही गाउँपालिकाभित्र पर्ने सीतुमारी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् । गणेशले अहिले त्रिभुवन आधारभूत विद्यालयको मैदानलाई आफ्नो आँगनको रुपमा प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
शनिबार दिनभर गणेशले थ्रेसर लगाएर मकै छोडाए । विद्यालयको मैदान मकै छोडाउँदा निस्किएको धुलोले भरियो । आइतबार पनि मकै छोडाए र सुकाए । गणेशको यो हर्कतप्रति त्रिभुवन आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सीताराम यादब सन्तुस्ट छैनन् । ‘गाउँका अगुवा हुन्, तर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नैजस्तो ठान्छन्,’ प्रधानाध्यापक यादवले भने, ‘ हामीले यसो नगर्नुहोस् भन्यो भने पनि लागू हुँदैन ।’ दिउँसो विद्यालय चालु भएकै समयमा गाईबस्तु ल्याएर किला गाढेर छोडिन्छ ।